INDAWO 'YOKUMBA' KWIFILIMU: YAYIPHI IFILM YENETFLIX? - INETFLIX
Iindawo zokufota 'zeDig': Yayiphi iFilm yeNetflix?
I-Dig , ephawula ukusungulwa kwefilimu enkulu yeNetflix, ibalisa elinye lazo zonke izihlandlo zembali kwinkulungwane yamashumi amabini. Ifilimu uCarrie Mulligan kunye noRalph Fiennes uxela ibali eliyinyani likaSutton Hoo, indawo apho umnini mhlaba waseNgilane waqesha umembi wezinto zakudala ukumbumba ipropathi yakhe. Into ayifumanisileyo apho yayinqanawa yokungcwaba ephantse yagcinwa ngokupheleleyo eyabhalwa kwakhona kwinkulungwane yesixhenxe kwaye ibiphethe ubuncwane bembali njengeemaski nezigcina-ntloko.
Isigqibo sikaJohn Serba wancoma idrama entsha njengemovie emangalisayo kuye I-Dig isishwankathelo sefilimu. Ngokuqinisekileyo, I-Dig izalisekisa ulindelo lwezinto zakudala ze-Oscar-bait, ubukhulu becala ziphezulu, zinxitywe njengoko zinamabhongo engqondo kunye nokusebenza ngamandla, imihlaba yokuqhayisa kunye nentambo etshayayo, isikweko kunye nesimboli, ulonwabo nokulila, amandla kunye nobuthathaka, uboya bexesha lasehlotyeni kunye noboya basebusika, uboya oburhawuzayo kunye noboya obukrwada. Kodwa ubuncinci ayisiyiyo iwotshi ebandayo, wabhala. I-Dig kukutya okuthuthuzelayo kwabasetyhini bexesha leti (emva koko abanye).
Unomdla malunga nokuseta ngasemva kwe-melodrama entle yeNetflix? Nantsi yonke into encinci kulungile ukufumanisa ngayo I-Dig Iindawo zokufota
UKUYILA IINDAWO ZOKUFAKA Iifilimu: BEKUPHI UKUYILA IFAYILI?
Ngoku ka Bustle , I-Dig yathatyathwa ikakhulu eSurrey naseSuffolk, iindawo ezimbini eNgilane. Ngokukodwa, iifoto ze-panorama zebhanyabhanya ziye zafota ngokujikeleza i-Snape Maltings, i-Aldeburgh yolwandle, kunye ne-Shingle Street, ngokuhambelana Iposi lakusihlwa laseYorkshire . I-Dig Iifilimu ezahlukeneyo zeSuffolk e-Iken, eButley naseRendlesham Forest.
Xa ifikile apha yokufota uSutton Hoo, I-Dig waya kwilali yase Shackleford, ebekwe malunga neekhilomitha ezingama-30 ngaphandle kweLondon eSurrey. Ukuba unethemba lokubamba umbono weyona Sutton Hoo in I-Dig , uphume ngethamsanqa. Kodwa iwebhusayithi eyaziwayo yezinto zakudala, ngoku eyiSiza seTrust yeSizwe, ihlala ivulekele iindwendwe, nangona i-coronavirus ikwenze kwaba nzima ukuhamba nokubona iSutton Hoo.
KUPHI UKUYILA THATHA INDAWO?
Ukumba kwenzeka ngokufanelekileyo kwindawo ebifotwe kuyo, eSuffolk, eNgilane. Umboniso bhanyabhanya ulandela ukufunyanwa kwenqanawa yokungcwaba iAnglo-Saxon eSutton Hoo ngo-1939. Inye kuzo zonke ezona ntsomi zinkulu zikaSuffolk ezikhoyo, utshilo uJim Horsfield, umphathi wokuphucula amashishini eSuffolk Screen, ngeBustle nganye. Umboniso bhanya-bhanya awukholeleki. Ukusuka kwindawo yokuvula yiSuffolk. Kuya kufundiswa ngakumbi ngendawo ye-IRL ukusuka I-Dig , zama ukupapasha kuyo yonke into esiyaziyo malunga neSutton Hoo.
IPHI I-SUFFOLK, ENGLAND?
Suffolk, England, indawo I-Dig yenzeka, imida yeNorfolk, iCambridgeshire ne-Essex, kwaye ibekwe kwicala lempuma yesizwe. I-Suffolk iyaqondwa ngobuchwephesha bayo, kwaye ukumbiwa kuyenzeka ngoku sithethayo, kufunyanwa izinto ezintsha kule ndawo ngabavubukuli ngoku nje kwiinyanga ezili-12 zokugqibela.
Izigaba: Amazon-Prime Inetflix Umqala
garett nolan net efanelekileyo
ngubani ongumama onqabileyo
jovi 90 wosuku umvuzo
mangaphi amaxesha erick kunye nodaka akhona kwi-hulu
i-chipotle ivaliwe ngomhla omtsha wonyaka